शिक्षामन्त्री बर्खास्तीको अडानले डा.केसीसँगको वार्ता असफल – YesKathmandu.com
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागमा सहमति जुटन नसकेपछि वार्ता निस्कर्षविहीन भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीले केसीका ७ माग तत्काल पुरा गर्ने तर मन्त्री र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको राजीनामाको अडान छाड्न आग्रह गरेका थिए । केसीले त्यही अडानलाई बटमलाईन बनाएपछि वार्ता निस्कर्षमा पुग्न नसकेको सरकारी टोलीले बताएको छ ।
नयाँ नीति र विश्वविद्यालय निर्माण नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने राज्यको विगतदेखिको नीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने, विषयमा र स्वास्थ्य सम्बन्धि दीर्घकालीन नीति तय गर्ने सरकारी वार्ता टोली सहमत भएको छ । त्यसका लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्नेबारेमा पनि सहमति भएको छ ।
नयाँ सरकार गठन गर्न संबैधानिक संकट छैनः डा. भट्टराई
कैदी भगाउने इन्सपेक्टरसहित चार प्रहरी हिरासतमा